Axmed Madoobe iyo Waare oo isaga baxay kulan ka socday Madaxtooyada Soomaaliya | Dusta News
Home > General > Axmed Madoobe iyo Waare oo isaga baxay kulan ka socday Madaxtooyada Soomaaliya
Axmed Madoobe iyo Waare oo isaga baxay kulan ka socday Madaxtooyada Soomaaliya
September 16, 2020 September 16, 2020 Dusta News71Leave a Comment on Axmed Madoobe iyo Waare oo isaga baxay kulan ka socday Madaxtooyada Soomaaliya
Shirka Muqdisho ee Madaxtooyada Soomaaliya maalintii Afaraad uga socda madaxweyanha Soomaaliya Maxamed cabdullahi Farmajo iyo madaxda Maamul gobleedayad iyo gobolka Banaadir ayaa lugta la galay marxalad kale oo adag kadib markii an xogta ku helnay in qaar akmdia h madaxda ay shirka isaga baxeen.
Wuxuu markii horeba shirka ku bilowday kala aragti duwanaan madaxda u dhaxeysay oo ku sabsan qodobada laga doodayay ee arrimaha salka ku hayay doorashooyinka dalka.
Waxaase labbadii maalin ee u horreysay xal loo helay in la isla fahmay dib ugu laabasho lagu sameeyo heshiskii Dhuusamareeb saddex iyo in shirka uu Muqdisho ka sii socdo iyadoo markii hore madaxda qaar ku doodayaan haddii heshiiskaas dib loogu noqonayo la aado magaalada Dhuusamareeb.
Qorshaha Sacaacadihii u horreeyay ee shirka Muqdisho ka socda wuxuu ahaa in is faham la gaaro lana soo saaro qodobada heshiiska Taladadii shalay , balse ma noqon oo waxaa la isku fahmi waayay qodobo ay kamid yihiin kaalinta guddiga doorahsooyinka ee hadda jira iyo go’aan ka gaarista magaalooyinka ay doorashada xildhibanada ka dhaceyso.
Illo wareedyo ku dhaw madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in maanta shirka lagu balansanaa dood adag balse uusan gabi ahaan tagin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni , halka muddo kooban oo ay shirka joogeen kadib isla manta iyaguna isga baxeen madaxwyenayaasha Jubbaland iyo Hirshabeelle, dhamaan waxaa lagu sababeeyay in ay salka ku heyso khilaafka madaxda ee qodobada laga doodayo.
Sidoo kale waxay wararku sheegayaan in inta badan madaxda Mamaul goboeldyada ay kamideysan yihiin in guddiga doorashooyinka meesha laga saaro, baadalkeedna ay iyagu mamalka wax ku yeeshaan la magacaabo guddi wada jir ah, balse uu diidan yahay madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale Madaxweyne Farmajo iyo madaxda dowlad goboleedyada isku racaeen in aysan suurto gal ahayn nidaamka xibsiyadda badan ee u qornaa heshiiskii Dhuusamareeb saddex.
Lama oga sida uu ku dambeyn doono shirkaan lagu kala arragti duwanaaday ee ka socda Muqdisho.
Shirkaan ayaa waxaa isha ku haya dhammaan daneeyaasha siyaasadda Soomaaliya sida siyaasiyiinta mucaaradka, urrurada rayidka iyo beesha caalamka.
Japan oo yeelatay raysal wasaare cusub
Taliska Ciidamada Xoogga oo xubno Shabaab ah ku dilay gobolka Hiiraan
Gudd. Xigeenka labaad ee Aqalka Sare oo eedeen u jeediyaya Ciidanka Kenya khudbadiisa Kulan wadajir ah ee labada Aqal BF
Dowladda Soomaaliya oo ka tacsiyeyday khasaaraha qaraxyadii ka dhacay Beirut